राजस्थान र तेलङ्गनामा विधान सभा निर्वाचन : कहाँ कति मत खस्यो ?
२२ मंसिर २०७५, शनिबार १३:३५
जयपुर, २१ मङ्सिर । भारतको राजस्थान र तेलङ्गना राज्यमा शुक्रबार विधानसभाका लागि मतदान भएको छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमले दिएको विवरण अनुसार राजस्थानमा ७२.७ प्रतिशत र तेलङ्गनामा ६७ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेका छन् । राजस्थान राज्यमा मात्रै एकसय ९९ स्थानका लागि भएको निर्वाचनमा झण्डै दुई हजारभन्दा बढी उम्मेदवार चुनावी मैदानमा थिए ।
राज्यका २०० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एकसय ९९ निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र चुनाव भएको हो । बहुजन समाज पार्टीका उम्मेदवारको निधन भएका कारण अल्वार निर्वाचन क्षेत्रको चुनाव स्थगित भएको छ । निर्वाचनका लागि राज्यभरीमा ५१ हजार ६६७ वटा मतदान केन्द्र राखिएको चुनाव आयोगले जनाएको छ ।
शुक्रबार भएको निर्वाचनको मतगणना भने आगामी डिसेम्बर ११ तारिखमा मात्र हुने आयोगले बताएको छ । निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र कङ्ग्रेसबीच कडा टक्कर हुने अनुमान गरिएको छ । यस चुनावमा दुवै पार्टीले कम्तीमा १०१ स्थान जित्ने दाबी गरेका छन् ।
सन् २०१३ मा भएको विधानसभा चुनावमा भाजपाले १६३ स्थान जितेर पूर्ण बहुमतको सरकार बनाएको थियो । कङ्ग्रेस २१ स्थानमा खुम्चिएको थियो ।
सहयोग गर्नुहोस्, ३० करोड मानिस भोकै छन् : राष्ट्र संघ
कर्णााली नदिको छेउमा बेवारिसे शव फेला
सूर्य थापाका भाइ स्वास्थ्य वीमा बोर्डमा नियुक्त
काठमाडौं उपत्यकामा एकै दिन ७३७ जनामा कोरोना
आजदेखि नक्साल र कमलपोखरीमा ट्राफिक लाईट सञ्चालन
यी बैंकहरुले सार्वजनिक गरे नयाँ ब्याजदर, कुन बैंकको कति ?
भोली देशभरका सबै अदालत बन्द
नेपाल बैंक लिमिटेड तथा लिसंखु पाखर गाउँपालिकाबिच सहकार्य गर्ने सम्झौता